नेपाल आज | लेखक सरिता तिवारीको प्रधानमंत्रीलाई सुझाव- पार्टीको नाम रामभक्त दल राख्नु !
माडीको नाम फेरेर अयोध्या राख्नु र त्यहाँ भब्य राममन्दिर बन्नु विकासको मार्ग खुल्नु हो त्यसैले मन्दिर त बन्नैपर्छ भन्ने झ्याँस तर्क गर्ने माडीबासी कथित कम्युनिष्ट हो !
१.माडीको नाम बदलेर अयोध्या नाम राख्नु झण्डै पाँच सय वर्ष यताको त्यहाँका थारु जातिको इतिहास, संस्कृति र त्यसका सबै उत्तरदानको अपमान हो । माडी (माड)थारु समुदाय आफैंले राखेको नाम हो । माडीको अर्थ ठूला ठूला पानीका पोखरी र रहहरु भएको दलदले सीमसार क्षेत्र भन्ने हुन्छ । माड क्षेत्रलाई बस्न योग्य बनाएर बस्ती बसालेर लामो समयदेखि बस्दै आएका थारु समुदाय हुन् । पहाडेहरुको आप्रवासन सं २०१३पछि राप्ती दून विकास विभागको परियोजनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत गराइएको हो । अयोध्यापुरी नाम गरेको बस्ती पुरानो माडीमा कहीँ कतै थिएन ।
२.मध्यकालीन चितवनका पाँचमध्ये एक प्रगन्ना माडीको तत्कालीन बसोबास साबिक गर्दी र बघौडामा मात्र सीमित थियो । साबिक कल्याणपुर र अयोध्यापुरी सरकारले जंगल फाँडेर वा जनतालाई नै फाँड्न आह्वान गरेर बसालेका नयाँ बस्ती हुन् । त्यस अघिको लामो कालखण्ड यहाँ केवल घना जंगल थियो ,जंगलछेउका कतिपय खुला ठाउँ थारुहरुका डिँगाबस्तु चर्ने चरन थिए । बरु माडीकै सोमेश्वर पर्वत क्षेत्र प्राचीन बसोबास र सामरिक दुबै दृष्टिले हेर्दा महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । किनभने त्यहाँ पुरातात्विक महत्वका सामग्रीका प्रशस्त अवशेष अहिले पनि भेटिन्छन् । तर ती अवशेष मल्ल र लिच्छवी कालीन भन्दा अगाडि जान सकिने किसिमका छैनन् । यहाँको प्राचीनता कति पुरानो हो त्यो खोज्न सकिन्छ तर यसले अयोध्याको कथासंगत भूमि पुष्टी गर्ने आधार कहीँ,कतै छैन ।
३.मन्दिर बनेरै समाजको विकास हुने भए मन्दिरै मन्दिरको देश भारत अहिले पनि संसारका एक तिहाई भोका मान्छेको देश किन कहलिन्छ? जबर्जस्ती कनीकनी रामजन्मभूमि दाबी गरेरै पनि हुने चाहिँ आखिरमा के हो ?
४. तपाईंहरुले ठूल्ठूला गफ दिनुभो । माडीमै जनकम्युन स्थापनादेखि दलित सवर्ण सहभोज र सांस्कृतिक रुपान्तरणकै लागि भनेर बाउआमा मर्दा काजक्रियासम्म नगरेर, दशैंतिहार बहिष्कार गरेर । बिगतमा गरेको त्यो चिजचाहिँ के थियो ? सत्तामा नपुगुन्जेलको नौटंकी प्रहसन ? यो खुलेर भन्नुपर्यो ।
५.तपाईंहरु कि हिजो गलत हुनुहुन्थ्यो कि आज गलत हुनुहुन्छ । दुबै अवस्थामा तपाईंहरुलाई सही किन मान्दिनुपर्ने ?
६.माडीको नाम फेर्ने र राममन्दिर बनाउने नै हो भने बिल्लिबाँठ परेर बसेका चेपांगको बस्ती बनाउने लोकप्रिय गफ गर्न पनि तत्काल बन्द गर्नुु्स् र सबैभन्दा पहिले पार्टीकै नाम फेर्नुहोस् -नेपाल जनता पार्टी,नेपाल रामभक्त दल अथवा त्यस्तै सुहाउँदो केही ! तर बिर्सेर पनि अब आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने नाम राखिरहने लोभ नपाल्नुस् ।
७.यो देश र यसको सरकार धर्मनिरपेक्ष हो र तपाईंको पार्टी अहिलेसम्म कम्युनिष्ट नै हो भन्ने मान्नुहुन्छ भने एकोहोरो लिँडेढिपी लगाएर कुनै ठाउँमाथि धार्मिक पन्थको राजनीति गर्ने, पुराण र उपन्यासका आधारमा गरिएका अपुष्ट र काइते तर्कका आधारमा राज्यकोषको करोडौं रकम 'राम' नामको परियोजनात्मक रणनीतिमा खर्चिनु नैतिक कुरा हो ?
८.माथीका सबै कुराको उत्तर तपाईंहरुमध्ये कसैसँग छ ? छ भने त्यसको जवाफ लेख्नुहोला ।
चक्रब्युहमा वामदेव: राष्ट्रपतिलाई किन तानियो विवादमा ?